Cunto bilaash ah ayaa sii socota sannadka oo dhan! | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha Aagga Stillwater ISD 834
Agoosto 6 , 2021
Quraac iyo qado BILAASH ah ayaa la siin doonaa dhammaan ardayda inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka 2021-2022 taas oo ay ugu wacan tahay maalgelin gaar ah oo ay ka heshay Waaxda Beeraha ee Mareykanka. Ardayda waxaa laga qaadi doonaa lacag ilbiriqsiyo iyo à la carte, iyo sidoo kale caano haddii ay keenaan cuntadooda. Qiimayaasha waa la beddeli karaa. Eeg liiska cuntooyinka oo wax badan baro .
In kasta oo cuntooyinka dugsigu yihiin lacag la'aan sannadkan haddana waxaan doonaynaa in qoysasku buuxiyaan Foomka Waxtarka Waxbarashada. Waxa kale oo loo yaqaan Codsiga Bilaashka ah & La -dhimay, waa wax ka badan qado bilaash ah! Barnaamijku wuxuu bixiyaa kaalmo lacageed waxyaabo kale oo badan, oo ay ku jiraan isboortiga/waxqabadyada, aaladaha, safarada dibadda iyo kuwo kaloo badan.
Foomka Faa'iidooyinka Waxbarashadu ma caawiso kaliya qoyskaaga, laakiin carruurta degmada oo dhan siyaabo badan. Hal foom oo keliya ayaa xaqiijinaya maalgelinta sii socota si loo taageero DHAMMAAN carruurta ku jirta dugsiyadeena. Qoysaska WAA IN ay buuxiyaan arjiga cusub ee faa'iidooyinka bilowga sanad dugsiyeed kasta ama dheefaha ayaa dhacaya!
Buuxi codsiga onlaynka ah ama soo dejiso nooc daabacan.